चिकित्सकको लापरबाहीका कारण गर्भवती आमा र बच्चाको ज्यान गयो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
चिकित्सकको लापरबाहीका कारण गर्भवती आमा र बच्चाको ज्यान गयो
शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १७:२७ मा प्रकाशित !
अस्पतालको चरम लापरवाहीका कारण सुर्खेतमा एकजना गर्भवती आमा र बच्चाको मृत्यु भएको छ । क्षेत्रीय अस्पताल कालागाउँ सुर्खेतमा महाबु गाउँपालिका ३ कालिकोटकी ३२ वर्षिया मनिसरा सिंहको आज बिहान मृत्यु भएको हो ।
सामान्य अवस्थामै रहँदा जाँच गराउन अस्पताल पुगेकी मनिसराको गुप्तांगबाट पानी बगेको भनी हात हालेर पानी पोका फुटालेर भर्ना गरेको आफन्तले बताएका छन् । जसका कारण विरामीको अवस्था झन नाजुक बनेको थियो ।
बिहान ११ बजे अस्पताल पुगेकी उनलाई दिनभरी सुत्केरी व्यथा नै नलागेको मृतककी दिदी गोमा शाहीले बताइन् । अस्पतालमा दिनभरी मनिसराले आफूलाई बचाईदिन भन्दै हार गुहार गर्दा पनि राती १ बजेसम्म पनि डाक्टर उपचारका लागि आएनन् ।
आफैले त्यस्तो अवस्था बनाएकी मनिसरालाई उपचारका लागि पछि चिकित्सकनै नआए पछि उपचार नपाएर उनको ज्यान गएको परिवारले जनाएका छन् । अस्पतालका डक्टर तथा नर्सहरुले बिरामीलाई भेट्नका लागि आफन्तलाई भित्र पनि जान नदिएको आफन्तले बताएका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: संसारमै कसैले न दिएको गिफ्ट भारतका चर्चित क्रिकेटर विराट कोहलीले आफ्नी पत्नी अनुष्कालाई दिए अमूल्य उपहार
NEXT POST Next post: सिण्डिकेटप्रति सरकार झनै कडाः नयाँ बसपार्कमा भएका सबै समितिका काउण्टर हटाइने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १७:२७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १७:२७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १७:२७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १७:२७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, बैशाख २१, २०७५ १७:२७